Ngabe i-Buy Button izosiza i-Social Media Attribution ne-ROI? | Martech Zone
NgoLwesithathu, Agasti 12, 2015 NgoLwesine, Novemba 5, 2015 Douglas Karr
Thenga izinkinobho ngumkhuba omusha oshisayo emithonjeni yezokuxhumana, kepha awutholi ukudonsa okuningi. Eqinisweni, i Invesp ucwaningo luthole ukuthi ukuthengiswa kwezentengiselwano yomphakathi kwakha kuphela u-5% wemali engenayo yokuthengisa online ngo-2015. Amasayithi amaningi enhlalo asalwela ukuthola ukwethenjwa kwamakhasimende, ngakho-ke amapulatifomu azodinga ukufakazela ukuthi angaphezulu nje kokwazi umphakathi ukuwathola.
Ngisalokhu ngifudumele ngokuthandwa kwezinkinobho zokuthenga zenhlalo ngalesi sikhathi. Akukhona ukuthi angizukusebenzisa - ngineqiniso lokuthi kukhona i-ROI enhle cishe kunoma yikuphi ukusetshenziswa. Othile, yebo, chofoza bese uthenge!
Kuyaziwa ukuthi ukhiye wokwandisa amazinga wokuguqulwa kwe-inthanethi ukunciphisa izinyathelo ezidingekayo ukuze uguqulwe. Unalokho engqondweni, kunengqondo kuphela ukuthi ukubeka inkinobho engenamthungo yokuthenga kusenesikhathi kakhulu kufaneli yokuthenga kunengqondo ngokuphelele. Kepha akunangqondo kangako. Ukuguqulwa kokuguqulwa kunciphisa izinyathelo ezithathwe esinqumweni sokuthenga kuya ekuguqulweni… inkinga ukuthi imithombo yezokuxhumana ayinaso isinqumo sokuthenga.
Ingabe lokho kuzoshintsha? Ngiyaqiniseka ukuthi kuzokwenzeka. Njengoba abathengi bethemba izikhwama zabo zenhlalo ngaphezulu futhi izindaba zensizakalo enhle ziqala ukungena emakethe, mhlawumbe bazosebenzisa lezi zindlela ngokwengeziwe. Kodwa-ke, angikwazi ukubona okwenhlalo njengomuntu othembekile okwamanje. Futhi ukuthembana kuyindlela ephelele yokuwina isinqumo sokuthenga.
Azikho izinkundla zokuxhumana ezinenombolo ongayishayela kuleli qophelo lapho ungena enkingeni (mhlawumbe zenza ngokuthenga, anginasiqiniseko). Ngabe ngifuna ukuchofoza ngempela buy futhi ngithumele i-oda kwalasha, ngizibuza ukuthi ngizozithola yini izimpahla zami, futhi ngizibuze ukuthi ngingalutholaphi uxhaso uma ngingalutholi?
I-Pinterest ibukeka njengendawo yezenhlalo esondelene kakhulu kuleli phuzu ngoba izithameli zabo eziningi sezivele ziyathenga futhi iziteshi zePinterest zingabonisa eduze amasayithi noma izinhlobo ezithuthukisiwe.
Nazi izibonelo zokusetshenziswa kwezinkinobho zokuthenga komphakathi
Inkinobho Yokuthenga ye-Facebook:
I-Twitter Thenga Inkinobho:
Inkinobho yokuthenga ye-Pinterest:
I-Instagram Buy Button:
Tags: isenzoinkinobho yokuthengafacebook thengainstagram thengainvestpinterest thengatwitter uthenge